Tooth enamel nafa kessa jabbicha yoo ta'u, Albudda bayye qabachunis naffa kessa tokkoffa dha. Tissueotta ilkanna kessa jirrani kessa afurenni kessa tokko yoo ta'u kan hafani immo dentin, cementum, and dental pulp jedhamu. Enameliin tissue ilkanni illan mullatuu isaa tokko qoffa yoo ta'u, jallani immo dentinitt qarqarra. Percentiin 96% Enamelii Albudda yoo ta'u bishaan fi organic materialiin percentii haffe qabbatu. Qallamuni Enamelii normalii tokko kellu iffu hanga addi dallattu jiddutti argama. Qarqarra ilkanni bakka dentiniin enamel jalla hin jirretti qalamuni enamelii akka semayawi jirra. Enameliin semitranslucent (ofii kessa ifaa kan dabarsu) waan ta'efi qalamun dentin fi wantotta birra enamel jallatti argamanii fakki qallamu enamelii fi sababa ta'u. Furdinni Enamelii ilkan irratti bakka bakkatti kan jijjiramu yoo ta'u, bakka cusp jedhamutti yerro bayye (hanga 2.5mm) furdatta. Fixe yokan border irratti immo bayye qallatta, bakki kunis akka cliniccementoenamel junction (CEJ) jedhama.
Enamelii kessatti albudii bayyinan argamu hydroxyapatite yoo ta'u albudii kuniscrystalline calcium phosphate dha. Albudii bayyen Enamelii kessatti argamu jabbena Enamelii qoffa osoo hin ta'in daffe cabbu Enamelii fi sababa ta'a. Dentiniin immo albudaa diqqo kan qabu yoo ta'u, daffe garru hin cabbu kuni immo Enameliin akka hin cabne qarqarra.
Dentin and Lafen wanna adda issa tolchu, enameliin collagen ofii kessa hin qabu. Haa ta'u malle kutta protein adda ta'e lamma qaba kunis kan amelogenin fi enamelin jedhamani dha. Fayyidan proteinotni kuni enameliif kennanin sirritti bekkamu battulle, proteinotni kuni guddina fakki fi mullatta enamelii kessatii fayyida qabu jedhame amanama.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Enamel&oldid=22254" irraa kan fudhatame
Last edited on 7 Bitootessa 2013, at 17:58
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 7 Bitootessa 2013, sa'aa 17:58 irratti.